वडाध्यक्ष नै गए रोजगारीका लागि कोरिया ! – Everest Dainik – News from Nepal
वडाध्यक्ष नै गए रोजगारीका लागि कोरिया !
संखुवासभा, असोज १५ । जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ५ नं. वडाका अध्यक्ष बमहादुर घले वैदेशिक रोजगारमा दक्षिण कोरिया गएको एक वर्ष वितेको छ ।
वडा अध्यक्ष घलेले नगरपालिका कार्यालयमा एक निवेदन समेत दर्ता गरेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिका कार्यालयमा वडा अध्यक्ष घलेले घरायसी कामका कारण घरबाहिर जानु पर्ने भएकाले आफूमा कार्यालयको काममा उपस्थित हुन नसक्ने पत्र दिएका बताइएको छ ।
वडा अध्यक्ष तोयनाथ ढुङ्गानाको हृदयघातका कारण केही महिना अघि मृत्यु भएको थियो । वडा अध्यक्षको मृत्यु भएकाले केही कार्यापालिका सदस्यहरुले उप निर्वाचन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । वडा अध्यक्ष ढुंगानाको मृत्यु भएपछि महिला वडा सदस्य सुनिता कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । राजधानीमा खबर छ ।
ट्याग्स: bambadhuar ghale, sankhuwasbha